နေလင်းအောင်: ကမ္ဘာ့အရောင်အသွေးအစုံဆုံး မြို့ငါးမြို့
ကမ္ဘာကြီးသည် သဘာဝအလှတရားများဖြင့် ပြည့်နေသည့်အပြင် လူတို့ဖန်တီးသော အံ့သြဖွယ် နေရာများဖြင့်လည်း ပြည့်နေသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ကမ္ဘာ့အရောင်အသွေးအစုံဆုံး မြို့ငါးမြို့အကြောင်း ဖြစ်သည်။
(၁) ရီရိုမက်ဂျီရို၊ အီတလီ (Riomaggiore, Italy)
လှပသော ရီရိုမက်ဂျီရိုမြို့သည် အီတလီနိုင်ငံ လီဂူရီးယား (Liguria) ဒေသတွင် တည်ရှိသည်။ ဤမြို့သည် (၁၃)ရာစုခေတ် သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများကြောင့် အလွန်လူကြိုက်များလျှက်ရှိသည်။ ဗာရာ (the Vara Valley) တောင်ကြားဒေသ နေထိုင်သူများသည် စပျစ်ပင်နှင့် သံလွင်ပင်များစိုက်ပျိုးရန် ဤတောင်စောင်းဒေသတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
(၂)နီဟေဗ်န်၊ ဒိန်းမတ် (Nyhavn, Denmark)
နီဟေဗ်န်သည် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ကိုဗင်ဟေဂင် (Copenhagen )မြို့တော်တွင် တင်ရှိပြီး တူးမြောင်းဘေးရှိ ဖျော်ဖြေရာ ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမြို့ကို (၁၇)ရာစုက တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (၁၇)နှင့် (၁၈)ရာစုခေတ်၏ အရောင်အသွေးစုံသော နေအိမ်နှင့် အရက်ဆိုင်များ၊ ကော်ဖီဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များ ရှိသေးသည့်အပြင် တူးမြောင်းတစ်လျှောက်တွင်လည်း သစ်သားသင်္ဘောအချို့ ရှိနေပါသည်။
(၃) ဂွာနာဂျာတို၊ မက္ကဆီကို (Guanajuato, Mexico)
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ မြောက်အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ ဂွာနာဂျာတိုသည် (၃၀၆၀၈) စကွဲယားစတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။ ၄င်းသည် စပိန်ကိုလိုနီခေတ်၏ ဗိသုကာလက်ရာများဖြင့် ခမ်းညားတောက်ပနေသော မြို့ကလေးဖြစ်သည့်အပြင် သတ္တုလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ကားလုပ်ငန်း၊ သားရေထည်လုပ်ငန်း၊ အစားအစာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာ တည်ရှိရာ မြို့လည်းဖြစ်သည်။ ဤမြို့ကို အရောင်အသွေးစုံအောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် အချက်တစ်ခုမှာ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပန်းရောင်နှင့် အစိမ်းရောင်ရှိ အနည်ကျ သဲကျောက်များပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းကျောက်များကြောင့် လှပပြီး အရောင်အသွေးစုံသော သွင်ပြင်လက္ခဏာ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
(၄) ဂျော့ဒ်ပါ၊အိန္ဒိယ (Jodhpur, India)
လူသန်းပေါင်းများစွာ နေထိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ရင်သပ်ရူမောဖွယ် သဘာဝအလှတရားများအပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့ တည်ဆောက်ထားသည့် လှပသော မြို့ကြီးများဖြင့်လည်း ပြည့်နှက်နေသည်။ ဂျော့ဒ်ပါမြို့သည် ရာဂျတ်စ်သန်( Rajasthan) ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လွှမ်းမိုးနေသည့် တောက်ပပြီး နေသာသော ရာသီဥတုကြောင့်လည်း နေမြို့တော် "Sun City" အဖြစ် လူသိများသည်။ အခြားနစ်ခ်နိမ်း (nickname )တစ်ခုမှာ အပြာရောင် "Blue City" မြို့တော်ဖြစ်ပြီး အပြာရောင်သုတ်ထားသည့် မရေမတွက်နိုင်သော အဆောက်အအုံများကြောင့် ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအပြာရောင် အဆောက်အအုံများကြောင့် ဂျော့ဒ်ပါမြို့ကို အလွန်ဝေးကွာသည့် နေရာကပင် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။
(၅) ဗာလ်ပါရေ့စို၊ ချီလီ (Valparaiso, Chile)
အံ့သြဖွယ် အရောင်အသွေးစုံဖြင့် လှပနေသော ဗာလ်ပါရေ့စိုမြို့သည် ချီလီနိုင်ငံတွင် တည်ရှိပြီး၊ နိုင်ငံ၏ အရေးအပါဆုံး သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဤမြို့ကလေးသည် တောက်ပနေသော အဆောက်အအုံများ၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စံအိမ်ကြီးများနှင့် ကျောက်စရစ်ခင်း လမ်းကလေးများဖြင့် ပြည့်နေသည်။
Ref; Top5Most Colourful Cities of the World by Rehan
World is full of natural wonders, as well as wonderful places made by men. There isabig number of colourful, populated and exciting cities, which you would be interested in visiting. Here'salist of Top5colourful cities of the world.
The beautiful city of Riomaggiore is situated in the Liguria region of Italy. This city is widely popular because of it's interesting history ranging back to the early 13th century. The inhabitants of the Vara Valley settled here in the ridges to safely raise grapevines and olive-trees.
Situated in Copenhagen, Denmark, Nyhavn isawaterfront, canal and entertainment district. This city dates back to the 17th century. It also has some brightly coloured 17th and early 18th century townhouses and bars, cafes and restaurants, along withafew wooden ships in the canal.
Located in North-Central Mexico, Guanajuato covers an area of 30,608 km². It isasmall city distinguished byawealth of Spanish colonial architecture, and alsoahome to several industries of metals, automobiles, leather goods and processed food. The thing that makes this city one of the most colourful one is the pink and green sandstone used for the construction of buildings, giving themabeautiful and colourful look.
India, the country home to overabillion people has gotanumber of eye-catching natural wonders as well as beautiful cities made by the Indians. The city of Jodhpur is situated in the Indian state of Rajasthan and is also called as the "Sun City" because of the bright, sunny weather which influences over this city throughout the year. Another nickname this city has is "Blue City" because of the innumerable number of blue-painted houses. These blue houses, make Jodhpur distinguishable even fromagreat distance.
This wonderfully colourful city is based in Chile, and is one of the most important seaports of the country. This little city is crowded with vibrant buildings, crumbling mansions and cobbled pathways.
Posted by နေလင်းအောင် at 7:38 AM